I-Baggy Boyfriend Inqotshwe I-Harem Jeans - I-Buddhatrends
Izinsuku ezithile zenzelwe i-denim kanti lezi jeans zinesitayela esiyingqayizivele nokufaneleka okukhululekile. Uzoba yintombazane epholile kunazo zonke ebhukwini kulezi zibopho ezihamba phambili, eziphelile futhi ezigqamile zibukeka i-Boyfriend Harem Jeans.
Khulisa isitayela sakho somgwaqo ngokufaka amabhuzu okulwa nokuthandwa kwekhonsathi yakho ye-90 kulezi zinwele zomzimba ze-baggy. Noma hamba i-Grunge nge-tee ephelile ne-hoodie. Ungakwazi futhi ukuwuthisa nge-top rippie tank top, izicathulo ze-Birkenstock bese ubeka izimbali ezinwele zakho. Ungakwazi ukuziveza ngezindlela eziningi kangaka, kungukuthi ukudala ukubukeka kwakho oyifunayo!
I-Loose Maxi Dress ne-Pockets $ 53.40 $ 89.00
Imikhono emifushane engaphezu kwe-Maxi Dress
Imikhono emifushane engaphezu kwe-Maxi Dress $ 53.40 $ 89.00
I-Corduroy ehlaza kakhulu
I-Corduroy ehlaza kakhulu $ 66.75 $ 89.00